Julie Iarisoa: manomana piesy roa, haseho tsy ho ela | NewsMada
Julie Iarisoa: manomana piesy roa, haseho tsy ho ela
Fotoana elaela no tsy nahitana an’i Julie Iarisoa an-tsehatra teto an-tanindrazana, ankoatra ny fandraisany anjara, miaraka amin’ny Anjorombala, kaompania noforoniny, tamin’ireo hetsika samihafa, mahakasika ny tontolon’ny dihy. Saingy, araka ny nambarany, tsy ho ela intsony fa ny 23 oktobra izao ny fotoana homeny ny mpankafy, etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely.
Ao anatin’ny fanomanana io fampisehoana io izy, amin’izao fotoana izao. Piesy roa be izao no hoentina an-tsehatra, amin’io andro io. Ny voalohany, ilay dihy an’olon-tokana, izay nanaovany fivahiniana narahim-pamokarana na “résidence de création”, tany Sénégal sy Frantsa, ny volana jona lasa teo. « Un voyage autours de mon nombril” ny lohateniny, noforonin’i Juliel Iarisoa ary lalaoviny irery.
Noforonina niaraka tamin’ny mpanakanto avy any Toliara, nandritra ny dian’ity mpanao soradihy ity tany Toliara, ny volana jolay teo. « Tsioka » ny lohateniny, ahitana mpandihy sy mpitendry dimy avy eto Antananarivo, miaraka amin’ny mpanao slam sy mpihira telo avy any Toliara. Araka ny fanazavan’i Julie Iarisoa hatrany, hoentina any Antsirabe, ao amin’ny Alliance française any an-toerana, ity soradihy ity, ny 26 oktobra.
Mandra-piandry ireo seho roa ireo, hisy fiofanana vaovao hatolotr’i Julie Iarisoa, ao amin’ny Studio Maray eny Androndra, toeram-pampianarana dihy naoriny, manomboka ny asabotsy 24 aogositra izao. Miompana amin’ny karazan-dihy “afro-contemporaine” ny fiofanana, izay natao ho an’ireo tanora mihoatra ny 16 taona.
Misokatra ho an’ny mpandihy izay liana ihany koa ny fotoam-pamerenan’ny kaompania Anjorombala, manomboka amin’ity herinandro ity, isaky ny alarobia sy zoma. Manampy ireo ny fitohizan’ny “Dihy ho an’ny rehetra”, tetikasa manokan’i Julie Iarisoa, fanao isaky ny asabotsy ary entina indrindra hampianarana dihy ireo ankizy sy tanora tsy manana fahafahana ara-bola amin’izany.